Lahatsary: ​​Fampiasana mifanohitra amin'ny famolavolana
Lahatsary iray momba ny endrika mifanohitra amin'ny fampiasana
Alakamisy, Jona 10, 2010 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2015 Douglas Karr
Jon Arnold dia manao asa mahatalanjona manazava izay ataon'ny orinasany, Tuitive = Azo ampiasaina. Misy fampiharana tsy mampino sasany any izay tsy mahita ny tara-pahazavana mihitsy. Mety hamaha olana sarotra be ny fampiharana, fa raha tsy misy mamantatra ny fomba hampiasana azy dia avo ny fandaozana ary ho sarotra ny varotra.
Mpitantana marika, mpitantana vokatra ary mpamorona sary matetika no mamaritra ny endrika sy fahatsapana ny fampiharana. Ny fampiasana no tapa-kevitry ny mpampiasa na izany aza! Ireo manampahaizana manokana momba ny fahaiza-miasa dia mandinika sy manatsara ny fifandraisan'ny olona amin'ny rindrambaiko hahazoana antoka fa mora ampiasaina sy tsotra ampiasaina izy io. lehibe Video.
Tuitive dia manolotra ireto serivisy manaraka ireto:
Fikarohana mpampiasa - "Fantaro ny mpampiasa anao, fa tsy anao izy ireo." Aza mamolavola “mpampiasa” tsy dia be saina loatra, avelao izahay hamoaka ny tena filan'ny mpampiasa, ny fitondran-tenany ary ny tanjony.
Interaction Design - Ny famolavolana fifandraisana dia ny fahalalana ny tanjon'ny mpampiasa anao no adika amin'ny fiasa misy dikany sy mora ampiasaina.
Famolavolana Interface an'ny mpampiasa - Ny famolavolana tsara indraindray dia mety ho hatsaran'ny famoronana kanto ary amin'ny fotoana hafa ny hatsaran'ny fahatsorana. Hahazoantsika tsara izany, ary amin'ny fomba manohana ny paikadin'ny marika ankapobeny.
Malagasy Design - Ny fizotran'ny famolavolana mifototra amin'ny mpampiasa dia mety indrindra amin'ny tranokala izay mila mihoatra ny bokikely an-tserasera.
Fitsapana azo ampiasaina - Aza maminavina intsony. Ny fanandramana ataonay dia hanamarina izay fomba mahomby sy azo hamarinina hahazoana valiny lehibe kokoa.
Zahao i Jon Arnold's bilaogy mahafinaritra.
Tags: intuitivejon arnoldny fiasa izanyuser experience
Ho an'ny orinasa, TSY Mora ny Media Vaovao
Mihazakazaka tsara kokoa ny Internet raha tsy misy Flash